तीन दिनदेखि बेनी–जोमसोम सडकमा सिधा सवारी अवरुद्ध (तस्बिर सहित) - Myagdi Online
तीन दिनदेखि बेनी–जोमसोम सडकमा सिधा सवारी अवरुद्ध (तस्बिर सहित)
4 महिना, 13 दिन अगाडि
२४ भाद्र २०७६, मंगलवार
623 पटक पढिएको
म्याग्दी २४ भदौ । बेनी–जोमसोम सडकमा तीन दिनदेखि सिधा सवारी अबरुद्ध बनेको छ । सडक खण्ड अन्र्तगत म्याग्दी र मुस्ताङको सिमाना घोप्टेभिरमा कालिगण्डकी नदीको कटानले सडकमा क्षति पुगेपछि सवारी अबरुद्ध भएको हो ।
पहिरोले सडकको करिब १० मिटर सडकको आधार नै भत्काएकाले भिरमा बिष्फोटक पदार्थको प्रयोग गरि नयाँ ट्याक निर्माणको तयारी गरिएको छ । डोजरको सहायताले मात्रै ट्याक निर्माण नभएपछि विस्फोटक पदार्थको प्रयोगले भिर फुटाउने तयारी गरिएको बेनी–जोमसोम कोरला सडक आयोजनाका सुपरभाइजर रिता बरुवालले जानकारी दिनुभयो ।
आईतवार विहान भत्किएको सडक मर्मतको काम भैरहेको छ, अप्ठ्यारो ठाउँ भएकाले मर्मतमा बढी समय लागेको छ ’’–बरुवालले भन्नुभयो । सडक अबरुद्ध बनेपछि मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसंग जोड्ने बेनी–जोमसोम सडकमा आवत जावत गर्ने सवारी साधन सिधा रुपमा ओहोर दोहोर गर्न पाएका छैनन् । यात्रुहरुले बिच सडकमा सवारी परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । मुस्ताङ भ्रमणमा गएका र जाने पर्यटकहरु, तिर्थयात्री र सर्वसाधारणले सास्ती भएको छ ।
भ्रमण वर्षकाे अवसरमा नारच्याङमा अन्नपूर्ण पर्यटन महोत्सव तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता हुँदै7घण्टा अगाडि
विकास निर्माणतर्फ म्याग्दीमा २१ प्रतिशत बजेट खर्च 8 घण्टा अगाडि
उपल्लो मुस्ताङ र कोरला नाका सुनसान हिजो
सभामुखमा अग्निको मात्रै उम्मेदवारी2दिन अगाडि
मंगलाघाटबाट ठुलो परिमाणको लागुऔषध सहित दाजुभाई पक्राउ2दिन अगाडि
म्याग्दी जेसीजको नेतृत्व चयन गर्न मतदान हुने, यि हुन अध्यक्षका दाबेदार !2दिन अगाडि
दुर्घटनामा घाईते अमित केसीको उपचारमा आर्थिक अभाव2दिन अगाडि
गलेश्वर– राखु भगवती सडकमा तोकिएको भाडा कहिल्य हुन्छ कार्यान्वयन ?3दिन अगाडि
लोप हुँदै परम्परागत पानी घट्ट, ढिकी र जाँतो3दिन अगाडि
जिल्ला स्तरीय मावि तह हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा गलेश्वर आदर्श प्रथम (तस्बिर सहित)4दिन अगाडि